Ukuphikisana Nomlando kanye Ne-Entre-Commuting | Martech Zone
Ukuphikisana Nomlando kanye ne-Entre-Commuting
NgoLwesihlanu, Mashi 26, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 U-Erik Deckers
Benginengxoxo emnandi nomngani wami, UChad Myers we-3 Hats Marketing, sixoxa ngokuthi kokubili umnotho wethu wezolimo kanye ne-Industrial Revolution kuholele kanjani emikhubeni yethu yokusebenza yanamuhla. Njenge amakhibhodi we-QWERTY ekhompyutha yethu . izinqumo zabasebenzi nezokusebenza. Futhi azisebenzi kahle.
Umnotho Wezolimo Uwuthinta Kanjani Umkhuba Wethu Womsebenzi
Uma ubheka amaBaby Boomers nokuxhumana kwemindeni yawo kwezolimo, umuntu oyedwa kwabane baseMelika wayexhunywe ngandlela thile nepulazi, imvamisa ipulazi lomndeni. Ngaleso sikhathi, nanamuhla, nanivuka lapho ilanga seliyoshona, nisebenze ukushona kwelanga. Ubungeke usebenze ebusuku, ngoba amasimu abengakhanyisiwe futhi ogandaganda bengenawo amalambu. Usebenze emini, ngoba oyise bebesebenza emini, njengabo oyise, kanye nobaba babo ngaphambi kwabo. Ngokuyisisekelo, selokhu saba nezolimo kulo mhlaba, ubusebenza emini futhi ulale ebusuku.
Kulezi zinsuku, akudingeki sikwenze lokho. Sinamalambu kagesi, siyakwazi ukusebenza ngezindawo zesikhathi, futhi sixhumana ngokushesha nge-Intanethi enejubane elikhulu.
Ukuthi Inguquko Yezimboni Iyithinta Kanjani Imikhuba Yethu Yomsebenzi
Ukusheshisa ngasekupheleni kweminyaka yama-1800 kanye nasekuqaleni kwawo-1900, lapho amafektri enyuka futhi i-automation iletha abantu abavela emapulazini beya emadolobheni ukuyofuna umsebenzi. Manje, uma kukhona okudinga ukwakhiwa, kwakwenziwa efektri. Futhi ngenxa yokuthi abantu babevela emapulazini, kwakudingeka basebenze phakathi kuka-8 no-5 futhi.
Kepha manje, ngoba ifektri ibisendaweni eyodwa, umsebenzi bekufanele wenziwe esizeni. Amathuluzi akho abekhona. Umkhiqizo wakho ubukhona. Ubuyingxenye yohlelo, futhi uma ubungekho, uhlelo luhlulekile. Bekubaluleke kakhulu ukuthi ubonakale.
Kulezi zinsuku, kusalindeleke ukuthi sivele. Umsebenzi wethu wenziwa esakhiweni samahhovisi. Sidinga ukuhlangana nabantu mathupha. Sidinga ukuhlala emapulazini ethu amancane, futhi siqhubeke nokukhipha. Uyingxenye yohlelo, kodwa nakhu abaphathi abangakakuboni okwamanje uhlelo ngeke lwehluleke ngoba awukho esakhiweni.
Ingxenye yesizathu ukungabethembi abaphathi. Uma bengakwazi ukusibuka, abazi ukuthi senziwa yini umsebenzi. Bakholelwa ukuthi singachitha isikhathi esiningi sizijabulisa esikhundleni sokwenza umsebenzi. Ungalokothi ukhumbule ukuthi bangakusho lokho noma kunjalo, lapho abantu bengafinyeleli isikhathi esinqunyiwe futhi umkhiqizo uphezulu noma phansi, noma ngabe abantu basesakhiweni. Kepha ngasizathu simbe, abaphathi bacabanga ukuthi abantu badinga ukuba khona ngaso sonke isikhathi, noma kungenzeki lutho.
Inkinga Yekhulu lama-21 Ebangelwa Ukucabanga Kwekhulu Le-19
Izinhlangano eziningi nezinhlangano zikahulumeni zisacabanga ngokwekhulu le-19 uma kukhulunywa ngezikhathi zokusebenza ezamukelekayo. Wena kumele ube sehhovisi kusukela ngo-8: 00 ekuseni kuya ku-5: 00 ntambama. Awuvunyelwe ukusebenza ekhaya, futhi awuvunyelwe ukusebenza kusukela ngo-9: 00 - 6:00, noma Unkulunkulu! 10: 00 - 7: 00.
Eminyakeni embalwa edlule, lapho ngangisebenzela i Umnyango Wezempilo wase-Indiana State, Ngokwengxenye nganginesibopho sohlelo lwesimo esasizolusebenzisa uma umkhuhlane we-pan wake wahlasela i-United States. Kodwa-ke, okuningi kwayo kwakugxile kubantu abakwazi ukusebenza ekhaya. Wonke umuntu waluthanda lolu hlelo wathi yilokho kanye ebesikudinga.
Ngathi, “Kuhle. “Kufanele sikusebenzise izikhathi ezimbalwa, futhi siqinisekise ukuthi wonke umuntu uyayisebenzisa. Lokho kuzovumela abasebenzi abadingekayo ukuthi basebenze amakhekhe, baqiniseke ukuthi bayakwazi ukufinyelela ku-inthanethi, nokuthi bonke ubuchwepheshe bethu buyasebenza. Ngaleyo ndlela, uma siyisebenzisa, asibizi sonke emnyangweni we-IT ngosuku lokuqala. ”
“Cha, asifuni ukwenza lokho,” kwaba impendulo. “Sifuna wonke umuntu asebenze lapha. Asenzi ezokuxhumana ngocingo. ”
Kwaba yilokho-ke. Ukuphela kwengxoxo. Asenzi ezokuxhumana ngocingo. Umnyango omkhulu kunabo bonke kuhulumeni wezwe, umnyango ophethe impendulo yombuso we-pan flu, futhi asizange “sidle okwethu ukudla kwenja. ” Ngakho-ke, akukho kuhlolwa, ngaleyo ndlela kukhubaze ukuphendula kwayo yonke inkampani lapho kufika isikhathi.
* bubula *
Isixazululo Sama-21st Century
Angivikelekile nakulolu hlobo lokucabanga. Njengomnikazi webhizinisi, angikabi naso isimiso somsebenzi esijwayelekile isikhathi esingaphezu konyaka. Ngifika ehhovisi sekwephuzile, ngoba ngihlala kuze kube sebusuku, imvamisa ngabo-2: 00.
Kodwa ngisazizwa nginecala lapho i-alamu ikhala ngo-8: 00, bese ngicabanga, “Bekufanele ngibe sehhovisi,” noma ngabe umzimba wami usongela ukungiphoqa ukuba ngikhwelwe ubuthongo.
Noma kunjalo, iningi lomsebenzi wami ngiwenza kusihlwa nasebusuku. Ngishayela ngiye futhi ngibuyele ehhovisi ngamahora angadluli, okusho ukuthi ngisebenzisa igesi encane. Ngisebenzisa isikhathi sami ukungena phakathi kwezitolo zekhofi noma amathilomu amancane. Singonga imali engakanani unyaka nonyaka uma abasebenzi bengakwazi ukulungisa amashejuli abo asemahhovisi ukuze afane namashejuli abo omsebenzi amahle kakhulu?
Uma izinkampani zingaphuma kule ndlela yokucabanga “asinakukuthemba”, futhi zithole izindlela ezintsha zokuvumela abasebenzi basebenze ekhaya, singanciphisa ukusetshenziswa kwethu kukaphethiloli. Singanciphisa izindleko zokusetshenziswa, ngisho nezindlu nezindlu, uma sinendawo encane yebhizinisi. Cabanga usebenzisa ibhilidi ingxenye yeshumi yobukhulu bokuqala, ungagcwaliswanga lutho ngaphandle kwamakamelo okuhlangana, amakamelo okuhlangana, namanye ama-cubicles kubantu abadinga ukuchitha isikhathi ehhovisi ngaphambi noma ngemuva komhlangano.
Uma izinkampani nezinhlangano zikahulumeni zingajoyina ikhulu lama-21, singenza izinto ezithile ezimangazayo. Kuze kube yileso sikhathi, sizovula izinsimbi zethu kulayini wokuhlangana, sihlanganise amahhashi silime amasimu.
Tags: ukuhambausomabhizinisiamahora okusebenzaamahora omsebenziukusebenza ekhaya
U-Erik uyi-VP ye-Operations & Creative Services ye- Isevisi yeBlog Blog. Ubelokhu ebhuloga isikhathi esingaphezu kweminyaka eyisishiyagalolunye (ngisho nangaphambi kokuba kubizwe ukubhuloga), futhi ubengumbhali oshicilelwe iminyaka engaphezu kwengu-20. Ungumbhali wephephabhuku elihlekisayo, futhi ubhale izindatshana zebhizinisi, imidlalo yasesiteji, imidlalo yaseshashalazini, futhi njengamanje usebenza kwinoveli. Usizile ukubhala iTwitter Marketing for Dummies, futhi uvame ukukhuluma ngokubhuloga nakwezokuxhumana.
Amandla we-ALT ne-TAB
Mar 27, 2010 ku-11: 03 AM
Okuthunyelwe okumangazayo, u-Erik. Ngingangeza ngithi ngiyakholelwa ekutheni inkinga enkulu ibangelwa ukungazwisisi kahle kwalelizwe kokuthi “Buyini ubuholi”. Iningi labaholi abangenamava engihlangana nabo bakholelwa ukuthi kungumsebenzi wabo 'ukulungisa' abantu nezinqubo. Ngenxa yalokho, bagxila kokubi… izici ezimbi zabasebenzi babo, izingqinamba ezingezinhle ngemikhiqizo nezinsizakalo zabo, izingqinamba ezingezinhle ngebhizinisi labo.
Kuzohlala kukhona okuthile 'okufanele kulungiswe' nawo wonke umuntu nawo wonke amabhizinisi. Lowo akuwona umsebenzi womholi. Umholi kufanele abheke ukuthi bangalivula kanjani ithalente kubasebenzi babo, ukuthi bangasebenzisa kanjani amandla emikhiqizo nezinsizakalo zabo, nokuthi bangazisebenzisa kanjani izinto ezinhle ezenziwa yibhizinisi labo ukuze zikhule.
Ngeshwa, sithuthukisa abantu ezingeni labo lokungakwazi ukusebenza kahle. Asinikezi abaphathi bethu noma abaphathi uqeqesho LUTHO lokuthi baphatha kanjani abantu ngempumelelo. Kubi kabi!
Mar 29, 2010 ku-8: 09 PM
Kuzwakala sengathi ufuna ukusebenza ku-ROWE 🙂